Tilmaamaha: 1. Waxaa lagu dhejiyay tuubbooyin laba jibaaran oo dhumuc weyn leh, DA 1325ATC R waa 4 dhidibada loo yaqaan 'ATC CNC Router' kaasoo gaari kara 0-180 digrii; Barayaashii caanka ahaa ee reer Japan ayaa taageeray shinnida inay si habsami leh u wareegi karto; 2. Yaskawa servo matoorrada iyo darawalada, hagida khadadka tareenka ee Taiwan iyo soo dejinta rarka ayaa la xaqiijiyaa xawaaraha mashiinka xawaaraha iyo saxnaanta, awoodda culeyska weyn, gudbinta siman iyo saxnaanta, buuqa hooseeya, iyo waqtiga dheer ee shaqeeya; 3. Nidaamka xakamaynta Taiwan ee Syntec - Hawlgal sahlan, taageer howlgalka qadka offline ....
Woodwood CNC Jarida iyo Mashiinka Qodista T4
Tilmaamo: 1. Afarta xawaare ayaa si otomaatik ah loogu beddeli karaa laguna beddeli karaa qalab kala duwan. Laba geed oo awood sare leh ayaa si gaar ah mas'uul uga ah bannaanaanta iyo jeexitaanka marka agabka la furo, iyo labada kale ee qulqulaya ayaa mas'uul ka ah qoditaanka. Marka albaabka golaha iyo albaabka is jiidjiiddu qaab ahaan yihiin, afarta qulqulaya ayaa si otomaatig ah ugu wareejinaya dhululubo ku dhammaystiraan hannaanka lagu sawirayo 4 qalab. Habboon oo ku habboon qallinka, goynta iyo qoditaanka qodista habka wax soosaarka xarunta, ...
Xarunta Woodworking Xarunta ATC CNC Mashiinka
Tilmaamaha: 1. Waxaa lagu dhejiyay tuubbooyin laba jibaaran oo dhumuc weyn leh, DA 1325ATC waa hal mashiin xirfadle ah oo loo yaqaan 'ATC alwaax CNC sawir-gacmeed kaas oo leh joornaalka qalabka' carousel '. 2. Yaskawa servo matoorrada iyo darawalada, hagida khadka tareenka ee Taiwan 30mm iyo gudbinta rakadaha la dhoofinayo waxay xaqiijinayaan mashiinka xawaaraha deg degga iyo saxnaanta, awooda xamuulka weyn, gudbinta siman iyo sax ahaanta, buuqa hooseeya, iyo waqtiga dheer oo shaqeynaya; 3. Nidaamka xakamaynta Taiwan ee Syntec - Hawlgal sahlan, taageer howlgalka qadka tooska ah. Qaboojinta hawada ayaa 9KW ATC, si fiican u garaac ...